Denmark oo adkeysay Sharuudaha Dadka ka imaanaya Gobolada Sweden Qaarkood Somali - Wararka Somalida, Caalamka
HomeWararka DenmarkDenmark oo adkeysay Sharuudaha Dadka ka imaanaya Gobolada Sweden Qaarkood
Denmark oo adkeysay Sharuudaha Dadka ka imaanaya Gobolada Sweden Qaarkood
February 16, 2021 Wararka Denmark, Wararka Maanta Somaliska, Wararka Sweden 0
Photo Johan Nilsson / TT
Danmark waxay adkaysay habraaca soo gelitaanka ee dadka safarka ah ee Iswiidhan ka socda ujeeddo ganacsi ama booqashada qaraabo. safarleyda ka imanaya meelaha ay u aragto “meelaha ay dhibaatadu saameysey” inay soo gudbiyaan natiijada baaritaanka Corona ee ugu badnaan muddada saddexda maalmood ah.
Danmark waxay u baahantahay natiijo hal usbuuc ah oo loogu talagalay dadka ka soo galaya Skåna, tusaale ahaan, ujeedada shaqada. In kasta oo muddada laga dhigay saddex maalmood hadda, si loo xaddido faafitaanka noocyo cusub oo faafa oo ka mid ah Coronavirus.
Marka loo eego kala soocista deenishka, “meelaha ay dhibaatadu saameysey” waxaa ka mid ah Skåna, Haaland iyo Blekinge. Danmark sidoo kale waxay ku dabaqday isla talaabooyinkaas dadka ka yimid gobolka Jarmalka ee Schleswig-Holstein.
Wasiirka cadaalada Denmark Nick Heckerup ayaa ku sheegay war-saxaafadeed uu maanta soo saaray, “Ma dhaawici karno dadaalada deenishka ee ka dhanka ah Corona. Waxaan aaminsanahay inay lama huraan tahay in markale la adkeeyo sharciyada. ” Sida uu soo xigtay TT.
Xayiraadaha adag ayaa la adeegsan doonaa laga bilaabo Arbacada soo socota, waxaana ka mid noqon doona, tusaale ahaan, dadka u safraya Denmark arrimo ganacsi ama booqanaya qaraabo